कोरोनाभाइरस, भ्रम र यथार्थता
– सन्दीप ज्ञवाली
विश्व नै आक्रान्त गरेको कोभिड–१९ सबैको लागि ज्यानमारा रोग बन्दैन । कसैलाई यो सामान्य रुघाखोकी बनेर आउँछ भने कसैको लागि यो काल बन्न सक्छ । विषेशगरी दीर्घरोगी, उमेर ढल्केका, मोटोपन भएका, रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसहरुमा यसले असर गरेको अहिलेसम्मको अध्यायनमा पाइएको छ । विभिन्न तथ्यांकहरु केलाउने हो भने अहिलेसम्म यसको मृत्युदर पनि न्यून छ ।
‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ नामक वेबसाईटमा भएको एक प्रतिवेदन अनुसार कोभिड–१९ महामारीले जर्मनीमा मृत्युदर ०.२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने इटालीमा ७.७ प्रतिशत, जबकी दुवै देशमा सङ्क्रमितको संख्या उस्तै–उस्तै रहेको छ । यसको मतलब के बुझ्न सकिन्छ कि देशअनुसार मृत्युदर भिन्न–भिन्न रहेको छ ।
नेपालकै कुरा गर्दा ४४ हजारभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्दा यसको मृत्युदर निकै कम पाइएको छ । यस महामारीकोे मृत्युदर नेपालमा ०.६ प्रतिशत छ । मृत्यु गणनामा भन्दा, यो लेख लेख्दासम्म २७१ रहेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सङ्क्रमितहरुको मृत्युदर १.८ प्रतिशत रहेको छ । संख्यामा भन्दा अहिलेसम्म ६८,४७२ रहेको छ ।
यहि तथ्यांक तेर्साएर अचेल सामजिक संजालमा थुप्रै लेख, स्टाटस र टुइटहरु कमेन्ट, सेयर गरिरहेको देख्न सकिन्छ । अचेल फेसबुक, ट्विटर, र युट्युबमा थुप्रै खालका ‘सचेतक’ समूह, र ‘सचेतनामुलक’ भिडियोहरु बनाएर जनतामा भ्रमपुर्ण कुराहरुको अनवरत प्रचार प्रसार भइरहेको छन् ।
के साँच्चिकै षडयन्त्र हो त ?
नेपालमा पनि ‘सचेतक’ समुह बनाएर अचेल कोरोनाभाइरस विरुद्व निकै आवाज उठिरहेका छन् । के उनीहरुका कुरा जायज छन् त ? आउनुहोस् परिचर्चा गरौँः
सामाजिक संजाल केलाएर हेर्दा त्यहाँ थुप्रै कुरा भइरहेको थियो । कोहि मास्क लगाउन हुँदैन किनकी विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३०० एन एम सम्म मात्र फिल्टर भएको एन–९५ मास्कले समेत ८०–१२० एन एम आकारको कोरोनाभाइरस छेक्न सक्दैन, तीन पत्र भएको मेडिकल मास्क र कपडाको मास्क त झन काम नै छैन भन्दै हल्ला फिजाइरहेको पाइयो । जबकी स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठनले “मास्क लगाएपनी कम्तिमा एक मिटरको दुरि कायम राख्नुपर्छ” भनेर आफ्नो वेबसाईटमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, दुई ठाउँमा पोसिटिभ र नेगेटिभ आएकाले, कसैले पिसिआर टेस्ट नै भाइरस पत्ता लगाउने टेस्ट होइन, यो एक षडयन्त्र हो भनेर भन्दै थिए । जबकी नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले “मानविय वा यान्त्रीक त्रुटिका कारण” कहिलेकाही हुनसक्छ भनेको छ । सोही समूहमा कोहि आफैँ विज्ञ बन्दै यो अर्बपती बिल गेट्सले आफ्नो फाउन्डेसनका तर्फबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर गरिएको प्रपञ्च हो भन्दै थिए । यस्ता खालका कुरा भ्रामक र टाउको दुखाईको विषय भएर केही महिनाअघि युट्युबले यस्ता भिडियो फिल्टर गर्ने काम सुरु गर्यो । तर यस्ता टाइटल र हेडलाईन भएका थुप्रै भिडियोहरु युट्युब र फेसबुकमा जति पनि भेट्न सकिन्छ ।
कोरोनाभाइरस लाई षडयन्त्र हो भनेर प्रमाणित गर्न अर्को तथ्यहिन आधार लादिन्छ, मृत्युको कारण अर्कै तर गणना भाइरसले हो भनेर भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधार मान्ने हो भने मृत्यु हुनुअघि कोहि मानिस भाइरसबाट संक्रमित छ भने उसको मृत्यु भाइरसले नै भएको हो भनेर मान्नुपर्छ । त्यसका पनि विभिन्न मापदण्ड छन्, ती सबै विश्व स्वास्थ्य संगठनको वेबसाइटमा पढ्न सकिन्छ । मृत्युको तथ्यांक फ्लू, टिबि, एचआईभी जस्ता रोगसँग जोडेर हेरिन्छ । टिबि पनि संक्रामक रोग हो तर किन लकडाउन नगरेको भनिन्छ, त्यसको प्रत्युत्तरमा यहि भन्न सकिन्छ कि फ्लू विरुद्ध भ्याक्सिन छ, टिबि विरुद्ध भ्याक्सिन र औषधि छन्, एचआईभी विरुद्ध एन्टिरेट्रोभल थेरापी छ, तर कोरोनाभाइरस विरुद्ध अहिलेसम्म अनुसन्धानमा रहेका औषधि मात्र छन्, र ती पुर्ण रुपमा काम गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसमा पनि विज्ञान अझै अज्ञान छ ।
मृत्युको तथ्यांकलाई नहेरौँ
दिनमा झन्डै डेढ लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ भनेर ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ नामक वेबसाइटमा सुचना छ । त्यसै गरि ५ करोड ६० लाख मानिसको एक वर्षमा मृत्यु हुने रहेछ । त्यसमा पनि दिनको लगभग ४९ हजार र वर्षेनि १ करोड ७९ लाख मृत्यु मुटु रोगले र दैनिक २६ हजार बर्षेनी लगभग ९७ लाख मृत्युु चाहिँ क्यान्सरले । र त्यही डाटालाइ कोरोनाभाइरससँग तुलना गरेर बारम्बार दैनिक सरदर १० हजार ‘मात्र’ मृत्यु हुने जाबो एउटा रुघाखोकीलाई किन यत्रो हव्वा दिएको भनेर डंका पिटिन्छ । तर, मुटु रोगको लागी सर्जरी छ, औषधि छ, क्यान्सर विरुद्ध किमोथेरापी, रेडियोथेरापी र अरु औषधि छन्, तर कोरोनाभाइरस विरुद्व हामीसँग अपर्याप्त ज्ञान बाहेक के छ र ?
चर्चित भारतिय पत्रकार तथा रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता रविश कुमारले एनडिटिभि इन्डियाको आफ्नो एक कार्यक्रममा भनेका छन्, “मृत्यु त मृत्यु हो, त्यसलाई मात्र भनेर, डाटा देखाएर, प्रतिशतमा रुपान्तरण गरेर यति–उति, थोरै–धेरै, कम–बढी भन्न मिल्दैन, उ सरकारको लागि केवल डाटा हो, तर परिवारको लागि दाइ, दिदि, बुवा, आमा, भाइ, बहिनी हो, त्यसैले मृत्यु त मृत्यु हो ।”
हो, यो लकडाउन र कोरोनाको हाउगुजी अब नसुहाउँदो तरिकाले फैलाएर अझै पनि जनता त्रसित गराउन खोजिएको छ । लकडाउन र कोरोनाका अत्याचार मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गमा निकै परेको छ । यस लकडाउनको उपायलाई अन्य उपायमा रुपान्तरण गरेर नव–सामान्यीकरणतर्फ लम्कन जरुरी छ । कोरोनाभाइरस जति सातो लानुपर्ने खालको गराइएको हो, त्यति ठूलो पेन्डेरोको बक्साबाट निस्किएको दुर्भाग्य चाहिँ यो होइन रहेछ भन्ने महसुस हुँदै छ । डाक्टर, नर्स र रोगीमाथि सामाजिक बहिष्कार गरेर अछुतो गराउन खोज्नु गलत हो । रुवाण्डा रेडियोले ‘तुत्सी’ विरुद्ध घृणा फैलाएजसरी कोरोनाको हाउगुजी तेर्साउने मिडिया गलत हुन् । दिर्घरोगी, अन्य रोग लागेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीले बेड र उपचार नपाउनु गलत हो । तर कोरोनाभाइरस नै गलत हो, एक षड्यन्त्र हो भनेर भन्नू चाहिँ अज्ञान मात्र हो । भनिन्छ नि, मान्छेलाई आफुलाई नपर्दा सम्म थाहा हुदैन, बिबिसीका अनुसार अमेरिकाको एक ट्याक्सी चलाउने मान्छे जसले कोरोनाभाइरस झुठ हो भन्दै प्रचार गर्थे, उनको श्रीमती केही दिन अगाडी कोरोनाभाइरसकै कारणले मरिन् । त्यसरी नै आफुलाई बज्रपात नपर्दासम्म झुठ हो भन्नू र अड्कल काट्नु स्वमंलाई र आफ्नालाई हानी पुर्याउनु हो । अन्ततः कोरोना एक महामारी हो, आशा गरौ यो महामारी हामीले छिटै जित्नेछौ, सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनका सबै नियम पालन गरौँ, साबुनपानीले मिचीमिची हात धोऔँ र नव–सामान्यीकरणतर्फ अग्रसर हौँ ।